လူထု လှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင်နေတဲ့ ပြည်သူတွေ အတွက် ထောပတ်ထမင်း နဲ့ ကြက်သားဟင်းများ ချက်ပြုတ် လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဖွေးဖွေး – GaMone Media
လူထု လှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင်နေတဲ့ ပြည်သူတွေ အတွက် ထောပတ်ထမင်း နဲ့ ကြက်သားဟင်းများ ချက်ပြုတ် လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဖွေးဖွေး
ပရိသတ်ကြီးရေပြည်သူ ချစ်အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဖွေးဖွေး ကတော့ လတ်တလော မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လူထုလှုပ်ရှားတွေမှာ ပြည်သူတွေနဲ့ အတူတစ်သား တည်း ပါဝင်ရပ်တည်ပေးနေသူတစ်ဦးပါ။ သူမကတော့ လူထု လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ စိတ်အားထက်သန်စွာပါဝင်ခဲ့ရုံ သာမကတတ်နိုင်တဲ့ ဘက်ကနေပြီး လူထုလှု ပ်ရှားမှုမှာပါဝင်တဲ့ပြည်သူတွေအတွက်စားစရာများချ က်ပြုတ် လှူဒါန်း ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ ဖွေးဖွေးကသူရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျ က်နှာကနေဦး လူမင်း ပါသွားပါပြီဖွေးတို့လဲအချိန်မရွေး ပါနိုင်ပါတယ်
ဘယ်သူလာဖမ်းဖမ်း CDM ဆက်လုပ် ကြပါ တကယ် ထိရောက်ပါတယ် ရုံးမတက်ကြပါနဲ့တော့အ သက်ပေးဆပ်ခဲ့ရတဲ့ လူငယ်လေးတွေလူကြီးတွေ အတွက်လဲကြိတ်မနိုင်ခဲမရမျက်ရည်ကျရတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီတခါအမှန်တရာကို အမှားတရားက နိုင်လို့မရဘူး စစ်အာဏာရှင်ကျဆုံးပါ မြန်မာပြည်သူပြည်သားများ ငြိမ်းချမ်းစွာအိပ်နိုင်နိုးထနိုင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေလက်ထဲအမြန်ပြန်ရော က်ပါစေ ကြောက်ခေတ်ကိုပြန်မသွားကြေး! ယနေ့ အလှူ ထောပတ်ထမင်း နဲ့ ကြက်သားဟင်း ၁၄၄ပွဲ I hope that People don’t react and can get some help from international
Once people react with violence, military can announce the detainme nt and willGet worseအရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်အ ကြမ်းမဖက် ဆန္ဒဆက်ပြမယ့်လူများCDMဝန်ထမ်းများကိုလေးစားလျက်ဖွေးဖွေးဆိုပြီး ရေးသားထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြှီးရေ။
source-Phway Phway crd crd လေးစားလျှက် crd
ပရိသတ္ႀကီးေရျပည္သူ ခ်စ္အႏုပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေဖြးေဖြး ကေတာ့ လတ္တေလာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့လူထုလႈပ္ရွားေတြမွာ ျပည္သူေတြနဲ႔ အတူတစ္သား တည္း ပါဝင္ရပ္တည္ေပးေနသူတစ္ဦးပါ။ သူမကေတာ့ လူထု လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ စိတ္အားထက္သန္စြာပါဝင္ခဲ့႐ုံ သာမကတတ္ႏိုင္တဲ့ ဘက္ကေနၿပီး လူထုလႈ ပ္ရွားမႈမွာပါဝင္တဲ့ျပည္သူေတြအတြက္စားစရာမ်ားခ် က္ျပဳတ္ လႉဒါန္း ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေန႔မွာဆိုရင္ေတာ့ ေဖြးေဖြးကသူရဲ႕လူမႈကြန္ရက္စာမ် က္ႏွာကေနဦး လူမင္း ပါသြားပါၿပီေဖြးတို႔လဲအခ်ိန္မေ႐ြး ပါႏိုင္ပါတယ္
ဘယ္သူလာဖမ္းဖမ္း CDM ဆက္လုပ္ ၾကပါ တကယ္ ထိေရာက္ပါတယ္ ႐ုံးမတက္ၾကပါနဲ႔ေတာ့အ သက္ေပးဆပ္ခဲ့ရတဲ့ လူငယ္ေလးေတြလူႀကီးေတြ အတြက္လဲႀကိတ္မႏိုင္ခဲမရမ်က္ရည္က်ရတယ္ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီတခါအမွန္တရာကို အမွားတရားက ႏိုင္လို႔မရဘူး စစ္အာဏာရွင္က်ဆုံးပါ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအိပ္ႏိုင္ႏိုးထႏိုင္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြလက္ထဲအျမန္ျပန္ေရာ က္ပါေစ ေၾကာက္ေခတ္ကိုျပန္မသြားေၾကး! ယေန႔ အလႉ ေထာပတ္ထမင္း နဲ႔ ၾကက္သားဟင္း ၁၄၄ပြဲ I hope that People don’t react and can get some help from international
Once people react with violence, military can announce the detainme nt and willGet worseအေရးေတာ္ပုံ ေအာင္ရမည္အ ၾကမ္းမဖက္ ဆႏၵဆက္ျပမယ့္လူမ်ားCDMဝန္ထမ္းမ်ားကိုေလးစားလ်က္ေဖြးေဖြးဆိုၿပီး ေရးသားထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ပရိသတ္ၾကႇီးေရ။
source-Phway Phway crd crd ေလးစားလွ်က္ crd
Previous post ဆန္ဒပြ လို့ ထွက်ပြေး နေရ တဲ့ သမီး ဖြစ်သူ အတွက် ဖခင် တစ်ယောက် ရဲ့ ရဲရဲတောက် အားပေးစကား
Next post အကြောက် တရားကင်းပြီး အမှန် ကို ရဲရဲ ဝံ့ဝံ့ ပြောနိုင်ဖို့ သားကို ပေးစား တစ် စောင် ရေးသား ခဲ့တဲ့ ကိုပေါက်